R/wasaare Gas oo booqdey dhaawaca ciidamada dawladda, lana wareegay gaadiid. – Radio Daljir
R/wasaare Gas oo booqdey dhaawaca ciidamada dawladda, lana wareegay gaadiid.
Luulyo 24, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, Jul 24 – Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta booqday dhaawaca ciidamada Qalabka Sida oo ku jira Isbitaalka AMISOM ee magaalada Muqdisho. Ujeedada booqashada ayaa aheyd
dhiirigelinta ciidamada Soomaliyeed iyo u kuurgelidda xaaladda caafimaad ee ciidamada.
Ra?iisul Wasaare Cabdiweli Maxamed Cali ayaa yiri: ?Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan booqdo dhaawaca ciidamada oo aan u kuurgalo xaaladdooda.
Xukuumaddu waxey mudnaanta koowaad siineysaa amniga iyo sidii ciidamada loo haqabtiri lahaa baahidooda. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa takhaatiirkta iyo shaqaalaha Isbitaalka AMISOM iyo dadaalkooda u gar-gaarka ciidamada iyo shacabka soomaaliyeed.
? Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan gacan qaado ciidamada dhaawaca ah ee ku jira Isbitaalka, isla markaana aan ka wareysto xaaladdooda iyo baahidooda. Xukuumada waxaa ka go?an u adeegidda shacabka, gaar ahaan caafimaadka oo ah aasaaska nolosha.?
Ra?iisul Wasaaraha ayaa u rajeeyey dhaawaca ciidamada inuu EEBBE bogsiiyo oo ay si dhaqso leh uga kabtaan dhaawacooda.
Ra?iisul Wasaaraha oo AU kala wareegey 3 gaadiid iyo 3 mootooyin casri ah
Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta kala wareegey Midowga Afrika (African Union) 3 gaadiid iyo 3 mootooyin oo loogu tala galay in Xukuumadda FKMG ah ay u isticmaalaan howlahooda muhiimka ah.
Ra?iisul Wasaaraha ayaa u mahadceliyey Midowga Afrika (AU) iyo sida joogtada ah oo ay u garab istaagan yihiin Dowladda Soomaaliya. Waxuuna uga mahadceliyey deeqdan maanta oo uu sheegay in Xukuumaddu ay baahi weyn u qabto gaadiid lagu wado howlmaalmeedka Xukuumadda.
General Nathan Mugisha, Taliyaha Ciidamada AMISOM oo ku wareejiyey deeqdan Ra?iisul Wasaaraha ayaa sheegay isagoo ku hadlaya magaca Guddoomiyaha Midowga Afrika in Midowga Afrika ay mar walba diyaar u yihiin sidii ay u garab istaagi lahaayeen Dowladda iyo shacabka Soomaaliya.
Booqashada Ra?iisul Wasaaraha ayaa waxey imaaneysaa maalin ka dib markii shalay uu baarlamaanka si aqlabiyad ah ku ansixiyey xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda.Booqashadan ayaa muujineysa mudnaanta amniga oo ay xukuumaddu shalay ka hor ballanqaaday baarlamaanka.
+252615536608 +252699998854 [email protected], [email protected] Mogadishu, Somalia http://daljir.com/
Maxkamaddii dambiyada culus ee Puntland oo la tirtiray iyo garsoorayaashii oo lagu kala daray maxkamadaha Bari iyo Mudug.
Baahin: Sabti, Jul 23, Weriye Adam Shardi ~ Daljir ~ Bossaso. Xukuumada R/wasaare Gaas oo heshay codka kalsoonida ee mudanayaasha baarlamaanka; Alle ha u naxariistee fannaana Kinsi X. Adam oo ku geeriyootay Hargeysa; Qaraxyo iyo dilal sababay dhimasha 92 qof oo rayad ah oo ka dhacay Oslo, Norway; Warbixin ku saabsan saamaynta abaaraha ee gobolka Hiiraan.